ပြိုင်ပွဲစုံ ရှုံးပွဲမရှိ ပွဲအများဆုံး စံချိန်ရေးထိုးထားတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းများ (၂)
9 Nov 2018 . 6:04 PM
ဒီရာသီ ဥရောပထိပ်သီးလိဂ် (၅)ခုမှာ ပြိုင်ပွဲစုံ ရှုံးပွဲမရှိတဲ့အသင်းဆိုလို့ ချယ်လ်ဆီးတစ်သင်းသာ ရှိပါတော့တယ်။ လီဗာပူးလ်၊ မန်စီးတီး၊ PSG ၊ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတို့ဟာ ပြည်တွင်းလိဂ်မှာ ရှုံးပွဲမရှိသေးပေမယ့် ဥရောပပွဲတွေမှာတော့ ရှုံးပွဲကိုယ်စီကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကတော့ ရာသီအစတုန်းက ကွန်မြူနတီဒိုင်းမှာ မန်စီးတီးကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် ကွန်မြူနတီဒိုင်းဟာ အဓိကပြိုင်ပွဲ စာရင်းထဲမှာ မပါဝင်ပါဘူး။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လိဂ်ဖလား၊ ယူရိုပါလိဂ်ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာ (၁၇)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိတော့ပါဘူး။ အရင်က အင်္ဂလန်ကလပ်တွေထဲမှာ တစ်ရာသီအတွင်း ပြိုင်ပွဲစုံ ရှုံးပွဲမရှိ ပွဲဆက်အများဆုံး အသင်းတွေ ရှိခဲ့ဖူးပြီး ပရိသတ်တွေ ဗဟုသုတအဖြစ် သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် အပိုင်း(၁)အပြီးမှာ အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . . . .
၅.အာဆင်နယ် (၂၀၀၇-၀၈ ၂၁ ပွဲ)
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို ရှုံးပွဲမရှိ ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး ‘Invincibles Team’ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ၂၀၀၇-၀၈ ရာသီတုန်းက ရာသီအစကို အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ ပရီးမီးယားလိဂ် (၁၃)ပွဲ၊ ချန်ပီယံလိဂ်(၆)ပွဲ၊ လိဂ်ဖလား(၂)ပွဲ ဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်းကောင်းကို ဆီဗီလာအသင်းက ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့တယ်။
၆.ချယ်လ်ဆီး (၂၀၁၄-၁၅ ၂၁ ပွဲ)
ဒီရာသီ ချယ်လ်ဆီးအသင်းအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ စံချိန်ဟောင်းကို အမီလိုက်နိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို မော်ရင်ဟို Mourinho ပြန်လည်ကိုင်တွယ်ပြီး ဒုတိယမြောက်ရာသီဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီတုန်းက ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် (၁၄)ပွဲ၊ ချန်ပီယံလိဂ် (၅)ပွဲ၊ လိဂ်ဖလား(၂)ပွဲဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိခဲ့ဘဲ နယူးကာဆယ်နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲကျမှ ပထမဆုံး ရှုံးပွဲတွေ့ခဲ့တာပါ။ ရှုံးပွဲမရှိ မှတ်တမ်းရပ်တန့်ခဲ့ပေမယ့် ရာသီကုန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လိဂ်ဖလားပါ ဆွတ်ခူးခဲ့လို့ အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်လို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇. လီဗာပူးလ် (၁၉၄၉-၅၀ ၁၉ ပွဲ)
အင်္ဂလန်ဘောလုံးလောကရဲ့ အောင်မြင်မှုအများဆုံးလို့ သတ်မှတ်ရမယ့် လီဗာပူးလ်အသင်းကလည်း တစ်ရာသီအတွင်း ရှုံးပွဲမရှိပွဲဆက်အများဆုံး အသင်းစာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ လီဗာပူးလ်အသင်းဟာ ပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်နဲ့ FA ဖလား ပြိုင်ပွဲတို့မှာ (၁၉)ပွဲဆက် ရှုံးပွဲမရှိခဲ့တာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအချိန်တုန်းက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးလို့ (၄)နှစ်လောက်သာရှိသေးတာကြောင့် အင်္ဂလန်မှာ ပြိုင်ပွဲ(၂)ခုသာရှိပြီး အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲနဲ့ FA ဖလားပြိုင်ပွဲတို့ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲစုံ ရှုံးပွဲမရှိ ပွဲအများဆုံး စံချိန်ရေးထိုးထားတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းများ အပိုင်း(၁)ပြီးတော့ အခု အပိုင်း(၂)ကို ဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲစုံမှာ ဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိဘဲ ကစားဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပေမယ့် ဒီအသင်းတွေကတော့ ထူးထူးခြားခြား စွမ်းဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလန်ကလပ်အသင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
Photo:IBTimes UK,101 Great Goals,Total-Goal.Com
ပွိုငျပှဲစုံ ရှုံးပှဲမရှိ ပှဲအမြားဆုံး စံခြိနျရေးထိုးထားတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးမြား (၂)
ဒီရာသီ ဥရောပထိပျသီးလိဂျ (၅)ခုမှာ ပွိုငျပှဲစုံ ရှုံးပှဲမရှိတဲ့အသငျးဆိုလို့ ခယျြလျဆီးတဈသငျးသာ ရှိပါတော့တယျ။ လီဗာပူးလျ၊ မနျစီးတီး၊ PSG ၊ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးတို့ဟာ ပွညျတှငျးလိဂျမှာ ရှုံးပှဲမရှိသေးပမေယျ့ ဥရောပပှဲတှမှောတော့ ရှုံးပှဲကိုယျစီကွုံတှခေဲ့ရတယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျးကတော့ ရာသီအစတုနျးက ကှနျမွူနတီဒိုငျးမှာ မနျစီးတီးကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပမေယျ့ ကှနျမွူနတီဒိုငျးဟာ အဓိကပွိုငျပှဲ စာရငျးထဲမှာ မပါဝငျပါဘူး။ အဲဒီနောကျပိုငျးမှာ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ၊ လိဂျဖလား၊ ယူရိုပါလိဂျဖလားပွိုငျပှဲတှမှော (၁၇)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိတော့ပါဘူး။ အရငျက အင်ျဂလနျကလပျတှထေဲမှာ တဈရာသီအတှငျး ပွိုငျပှဲစုံ ရှုံးပှဲမရှိ ပှဲဆကျအမြားဆုံး အသငျးတှေ ရှိခဲ့ဖူးပွီး ပရိသတျတှေ ဗဟုသုတအဖွဈ သိရှိနိုငျစဖေို့အတှကျ အပိုငျး(၁)အပွီးမှာ အပိုငျး(၂)ကို ဆကျလကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . . . .
၅.အာဆငျနယျ (၂၀၀၇-၀၈ ၂၁ ပှဲ)
၂၀၀၃-၀၄ ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို ရှုံးပှဲမရှိ ဆှတျခူးခဲ့ပွီး ‘Invincibles Team’ ဖွဈခဲ့တဲ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာ ၂၀၀၇-၀၈ ရာသီတုနျးက ရာသီအစကို အကောငျးဆုံးဖွတျသနျးနိုငျခဲ့တယျ။ ပရီးမီးယားလိဂျ (၁၃)ပှဲ၊ ခနျြပီယံလိဂျ(၆)ပှဲ၊ လိဂျဖလား(၂)ပှဲ ဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ ရှုံးပှဲမရှိ မှတျတမျးကောငျးကို ဆီဗီလာအသငျးက ရပျတနျ့နိုငျခဲ့တယျ။
၆.ခယျြလျဆီး (၂၀၁၄-၁၅ ၂၁ ပှဲ)
ဒီရာသီ ခယျြလျဆီးအသငျးအနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ စံခြိနျဟောငျးကို အမီလိုကျနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမယျ။ ခယျြလျဆီးအသငျးကို မျောရငျဟို Mourinho ပွနျလညျကိုငျတှယျပွီး ဒုတိယမွောကျရာသီဖွဈတဲ့ ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီတုနျးက ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ (၁၄)ပှဲ၊ ခနျြပီယံလိဂျ (၅)ပှဲ၊ လိဂျဖလား(၂)ပှဲဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့ဘဲ နယူးကာဆယျနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲကမြှ ပထမဆုံး ရှုံးပှဲတှခေဲ့တာပါ။ ရှုံးပှဲမရှိ မှတျတမျးရပျတနျ့ခဲ့ပမေယျ့ ရာသီကုနျမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ၊ လိဂျဖလားပါ ဆှတျခူးခဲ့လို့ အောငျမွငျမှုရခဲ့တယျလို့ သတျမှတျရမှာဖွဈပါတယျ။
၇. လီဗာပူးလျ (၁၉၄၉-၅၀ ၁၉ ပှဲ)
အင်ျဂလနျဘောလုံးလောကရဲ့ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံးလို့ သတျမှတျရမယျ့ လီဗာပူးလျအသငျးကလညျး တဈရာသီအတှငျး ရှုံးပှဲမရှိပှဲဆကျအမြားဆုံး အသငျးစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ လီဗာပူးလျအသငျးဟာ ပွညျတှငျးပွိုငျပှဲတှဖွေဈတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျနဲ့ FA ဖလား ပွိုငျပှဲတို့မှာ (၁၉)ပှဲဆကျ ရှုံးပှဲမရှိခဲ့တာပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီအခြိနျတုနျးက ဒုတိယကမ်ဘာစဈပွီးလို့ (၄)နှဈလောကျသာရှိသေးတာကွောငျ့ အင်ျဂလနျမှာ ပွိုငျပှဲ(၂)ခုသာရှိပွီး အမှတျပေးပွိုငျပှဲနဲ့ FA ဖလားပွိုငျပှဲတို့ဖွဈပါတယျ။
ပွိုငျပှဲစုံ ရှုံးပှဲမရှိ ပှဲအမြားဆုံး စံခြိနျရေးထိုးထားတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးမြား အပိုငျး(၁)ပွီးတော့ အခု အပိုငျး(၂)ကို ဆကျလကျဖျောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ပွိုငျပှဲစုံမှာ ဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိဘဲ ကစားဖို့ဆိုတာ မလှယျကူပမေယျ့ ဒီအသငျးတှကေတော့ ထူးထူးခွားခွား စှမျးဆောငျပွနိုငျခဲ့တဲ့ အင်ျဂလနျကလပျအသငျးတှပေဲ ဖွဈပါတော့တယျ . . .